प्रधानमन्त्रीले कोरोना फैलाएको प्रचण्डको आरोप ! |
प्रधानमन्त्रीले कोरोना फैलाएको प्रचण्डको आरोप !
काठमाडाैं २७,बैशाख २०७८ /नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो पार्टीले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्ने धारणा राख्दै ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीलाई कोरोना फैलाएको आरोप लगाएका छन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएको बेला रथयात्रा, उद्घाटन लगायतका समारोह गरेर कोरोना फैलाएको आरोप उनले लगाएका हुन् ।
उनले कोरोना सुरु भएपछि रथयात्रा किन गर्नुभयो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । केही समय पछि गरेको भएपनि हुन्थ्यो उनले भने, ‘रथ यात्रा अलि पछि गरे हुँदैन थ्यो । मैले भनेकै छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्यापुरी बनउाने भन्नुभएको छ मैले गएर पनि हेरे खुसी लागेको छ । तर कोभिडको दोस्रो लहर भएको बेलामा यतिबेलै गर्नुपर्ने थियो अलि पछि गरेको भएपनि हुन्थ्यो ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थुप्रै शिलान्यास गरेको भएपनि बजेटको ग्यारेन्टी नभएको बताए । प्रचण्डले देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अन्तरगत चितवनमा बनाउने विषय कटौती गरेको प्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्री पूर्वाग्रह राखेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना हटाएको पनि आरोप लगाए ।